Global Voices teny Malagasy » Lazao Hoe Inona?! Habaka Manangona Resa-Pankahalàna Hisorohana Fandripaham-Bahoaka · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 07 Janoary 2014 21:42 GMT 1	 · Mpanoratra Laura Morris Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Fitaovana, Mediam-bahoaka, Rising Voices
Araka ny lahatsoratra iray navoakan'ny Genocide Watch , dia ahitana fizotra manana dingana maromaro ilaina fantarina sy dinihana isan-dingana ao anatin'izany. Iray amin'ny dingana tsy maintsy ilaina ny fanasokajiana, na fametrahana marika (sariohatra).
Ny Hatebase  dia firaketan-tahiry ifandrimbonan'ny besinimaro natsangana hanangonana resa-pankahalana ho famantarana sy ho fisorohana (ny herisetra). Amin'ny alalan'ny tahiry, afaka mandrakitra ireo tatitry ny “tsikaritra” sy ny voambolana nampiasaina ny olona tsirairay, manondro ny toerana nampiasàna ilay voambolana. Nilaza tamin'ny alalan'ny resadresaka tamin'ny mailaka ny mpanorina Timothy Quinn fa “ny fanalahidin'ny Hatebase dia ny mahita azy ho toy ny soso-tahiry tahaka ny fifamoivoizana eo an-tampon'ny saritanin'ny tanàndehibe iray.
Mba hanomezana alalana ireo fikambanana hiditra ao amin'ny tahiry mba hampiasa fampiharana hafa, nandany fotoana maro nanangana ny open API  iray ny mpamorona ny habaka. Quinn:
Fa inona no marina no atao hoe “resa-pankahalàna”. Ny hita ao amin'ny habaka  dia:
Raha mila fanampim-baovao ianao, vakio ny momba ny asan'izy ireo ao amin'ny The Sentinel Project  na araho ao amin'ny Twitter @hatebase_org  izy ireo.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/01/08/55946/
 lahatsoratra iray : http://www.genocidewatch.org/aboutgenocide/8stagesofgenocide.html